Final - 20 septembre 2021 - Fichier PDF
Ce document au format PDF 1.4 a été généré par Adobe InDesign CS3 (5.0) / Adobe PDF Library 8.0, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 04/07/2018 à 09:19, depuis l'adresse IP 193.248.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 792 fois.
Taille du document: 44.5 Mo (26 pages).
Laharana faha 76
Alahady 01 Jolay 2018
25 Taona nizarana hamamiana
ENDRIKY NY GAZETY EDISIONA VOALOHANY
ENDRIKY NY GAZETY EDISIONA ANKEHITRINY
« Izay soratra rehetra nomen’ny tsindrimandrin’Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra,
ho fanitsina izay diso, ho fitaizana amin’ny fahamarinana . » 2Timoty ;3 / 16
Pejy faha 3
Seho: «Nosy Mamiko»
Pejy faha 4
Ireo nanorina ny Gazety Tantely
Pejy faha 5
Ny Gazety Tantely Edisiona voalohany, amin’ny endriny nanotana
azy, tsy nasiam-piovana
« Manamasina azy amin’ny fahamarinana; ny teninao no fahamarinana» (Jao. 17 : 17)
Vavaka fanaovam-beloma ny mpianatra
ity Jaona toko faha 17 ity. Vavaka notononin’i Jesoa ho fisaorana an’Andriamanitra
noho ny mpianatra sy fitrotroana am-bavaka azy ireo miatrika ny fijoroana vavolombelona. Tsy vavaka ho an’ny Apostoly
12 ihany akory ity vavaka ity, fa vavaka
ho an’ny mpianatr’i Jesoa rehetra, izany
hoe, vavak’i Jesoa ho an’ny Fiangonana.
Ny andininy faha 17 dia mangataka fanamasinana ny Fiangonana amin’ny fahamarinana mba hahafahany miasa eto anivon’izao tontolo izao. Ity andininy ity no
tononin’ny Fiangonana FJKM aorian’ny
famakiana ny Soratra Masina satria andininy mampifamatotra ny fahamasinana
amin’ny Tenin’Andriamanitra. Zavatra
roa lehibe àry no tokony ho ao an-tsaina
raha manonona ity andininy ity. Ny voalohany, ny maha zava-dehibe ny fahamasinana. Ny faharoa, ny maha zava-dehibe
Ny maha zava-dehibe ny
Ny teny hoe « fahamasinana » izay matetika fampiasan’ny Soratra Masina, indrindra ny Testamenta Taloha, dia nalaina
avy amin’ny mpamari-toetra hoe masina
izay nanjary matoateny hoe manamasina.
Ny heviny ara-bakiteny dia hoe manavaka na manokana. Ny sary ao an-tsaina dia
misy zavatra maromaro ka misy atokana
manokana na avahana manokana mba ho
ampiasaina. Ny hoe fahamasinana àry,
araka izany, dia tsy inona fa ny fanavahan’Andriamanitra ny Fiangonana niala
tamin’izao tontolo izao, na dia eto anivon’izao tontolo izao aza. Indroa na intelo miantoana ny lalan’ny fahamasinana.
Ny voalohany dia ny fiantsoana izay
itakiana fanoloran-tena ; ny faharoa dia
ny fanamarinana izay vokatry ny fibebahana ; ary ny fahatelo dia ny fahamasinana vokatry ny fiainam-bavaka. Mba
hahafahan’Andriamanitra mampiasa ny
Fiangonana sy mampiasa antsika sy mba
hahafahantsika mijoro vavolombelona
dia nanamasina antsika Andriamanitra.
Amin’ny alalan’ny Fanahy Masina no
anamasinan’ny Tompo antsika sady Izy
rahateo no tombokase maha zanak’Andriamanitra antsika. Tsy afa-miatrika ny
fijorona vavolombelona isika raha mbola
rakotry ny fahotana sy ny fahalotoan’izao
Koa navelan’Andriamanitra tamin’ny
alalan’i Jesoa Kristy Tompo ny helotsika
ary nohamasininy tamin’ny alalan’ny Fanahiny isika mba ho olom-baovao.
Izay no nahatonga an’i Jesoa nangataka
tamin’Andriamanitra Ray mba hanamasinana antsika. Izany hoe, nangataka tamin’Andriamanitra mba hanomezany ny
Fanahy Masina honina ato anatintsika.
Tsy i Jesoa mantsy no manamasina raha
amin’ity vavaka ity fa loharanon’ny famelan-keloka sy ny fanadiovana antsika izy,
fa ny Fanahy Masina izay omen’Andriamanitra amin’ny alalany no manamasina
antsika, ka mahatonga antsika ho vaovao
Zava-dehibe ny fanamasinana satria
herim-panahy mahatonga antsika ho
azon’Andriamanitra ampiasaina, nefa indrindra koa herim-panahy hahafahantsika
manohitra ny asan’ilay ratsy. Ny olona
nohamasinin’ny Fanahy Masina tamin’ny
alalan’i Jesoa Kristy Tompo dia tsy
azon’ilay ratsy hampangaina. Ny voampanga mantsy dia tsy afaka manao na inona na inona, sady tsy azo ampiasaina.
Eto dia mifamatotra ny fahamasinana sy
ny Tenin’Andriamanitra. Ny Tenin’Andriamanitra no manamasina antsika sy
manamarina antsika. Inona no hevitr’izany ? Ny Tenin’Andriamanitra dia teny velona, ka ny fihainoana sy ny fankatoavana
azy dia mahatonga fibebahana sy fihavaozam-panahy ary hetaheta ny hanaraka an’i
Kristy. Io Tenin’Andriamanitra izay teny
velona io, izay ampahatsiahivin’ny Fanahy Masina mandrakariva ao am-pon’ny
olona dia manjary fiainana ho azy.
Ny Fanahy Masina rehefa ao am-pon’ny
olona ka manamasina azy, dia mampahatsiaro azy ny Tenin’Andriamanitra,
araka ny tenin’i Jesoa hoe ny Fanahy Masina dia tsy milaza zava-baovao akory fa
mampahatsiaro ny zavatra efa nolazain’i
Jesoa. Araka izany, ny Fanahy Masina dia
tsy Andriamanitra vaovao akory fa Andriamanitra mampahatsiaro ny olona ny
Tenin’Andriamanitra izay efa nolazaina
hatrany amin’ny Testamenta Taloha ka
hatraty amin’ny Testamenta Vaovao.
Ny Fanahy Masina dia mamerina ny olo-
na ao amin’ny Soratra Masina hatrany
ary ny fahamasinana dia ateraky ny fiainan’ny olona ny Soratra Masina. Mialoha
ny hanirahan’i Jesoa ny mpianatra sy ny
Fiangonana ho aty amin’izao tontolo izao
dia tsy vitan’ny hoe nohamasinina ihany
izy fa nomeny azy ihany koa ny Soratra Masina, na ny fampianarana, mba ho
mari-dalana hiainany ny fahamasinana.
Fanomezana avy amin’Andriamanitra ny
Soratra Masina izay mirakitra ny fampianaran’i Kristy ary io no torian’ny Fiangonana sy ampianariny ny mpino amin’ny
maha olomboatokana, na olomboantso,
na olona navahina raha tsorina amin’ny
maha olomasina azy. Vavaka sarobidy àry
ity andininy ity satria vavaka mangataka
ho antsika mba ho tia ny Soratra Masina,
ho tiany Tenin’Andriamanitra ary hahatsiaro fa ny fahamasinana sy ny fijoroana
vavolombelona dia tsy afa-misaraka velively amin’ny Soratra Masina.
Ity volana Jolay ity, ny lohahevitra dia
ny hoe « sahia mitory fahamarinana ». Eo
amin’ity vavaka ity, ny tapany voalohany
dia manao hoe « manamasina azy amin’ny
fahamarinana ». Azo adika toy izao io andininy io : hamasino amin’ny alalan’ny
fahamarinana ny Fiangonanao na koa
hamasino ao anatin’ny fahamarinana ny
Fiangonanao.Tsy afa-misaraka ihany koa
izany amin’ny fahamasinana ny fahamarinana ary tsy ny fahamarinan’olombelona anefa fa ny fahamarinan’Andriamanitra. Ny fahamarinan’Andriamanitra
izay miainga amin’ny fitiavana, miainga amin’ny Soratra Masina ary jerena
amin’ny alalan’i Jesoa Kristy Tompo. Tokony hijoro ho vavolombelon’ny fahamarinan’Andriamanitra hatrany ny Fiangonana. Ny fahamarinan’Andriamanitra izay
midika fa tian’Andriamanitra ho vonjena
izao tontolo izao ka nomeny ny Zanany
Lahitokana mba hamonjy azy. Fahamarinan’Andriamanitra izay midika koa fa azo
atao tsara ny miaina ny Tenin’Andriamanitra amin’ny fiainana isan’andro noho ny
amin’i Jesoa sy ny Fanahy Masina. Ary
indrindra ny fahamarinan’Andriamanitra
izay mitondra fiainana sy manasitrana ny
« Izay soratra rehetra nomen’ny tsindrimandrin’Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho
fandresen-dahatra, ho fanitsina izay diso, ho fitaizana amin’nyf ahamarinana . » 2Timoty ;3 / 16
Araka io tenin’Andriamanitra voalaza etsy ambony io dia natao ho fitaizana amin’ny fahamarinana,
amin’ny fanitsiana ary amin’ny fampianarana sy ny fandresen-dahatra ny soratra rehetra nomen’ny tsindrimandrin’Andriamanitra.
Ny gazety «
romaro nampita ireo
andro hisaorana ireo
roana eto ihany koa
TANTELY » dia anisan’ny fitaovana iray nentin’ireo mpiara mivavaka mavoalaza ireo teto amin’ny Fiangonana. Amin’izao fotoana izao indrindra no
Ray aman-dreny namorona ary mbola manampy amin’izao fotoana izao, tsaireo namana izay efa nandao antsika teo amin’ny famolavolana ny Gazety .
Manana ny anjara andraikiny tokoa ny gazety satria izy no isan’ireo mitahiry ireo tsiaro an-tsary na koa
an-tsoratra amin’ireo fotoana maro efa lasa.
Tsy vitan’izany fa ny gazety dia fitaovana nentina nampitana ny soa sy ny tsara ho fantatra teto amn’ny
fitandremana, mazana dia voatatitra tao avokoa ireo fotoana manan-tantara. Tao koa ireo tatitra isam-piandraiketana sy isan-tsampana ary ny teo anivon’ny Foibe sy ny synodam-paritany.
Isan’ny zava- tsoa lehibe indrindra nentina teto amin’ny gazety «TANTELY» dia ny fanabeazeana arapanahy teo amin’ny samy Kristianina izay nandraisan’ireo Ray aman-dreny ara-panahy anjara ka ampitan’izy
ireo hafatra sy fampianarana avy amin’ny tenin’Andriamanitra mba hitomboan’ny fahasoavana sy ny fahatokiana
an’Andriamanitra eo amin’ny tsirairay. Tao ihany koa anefa ireo pejy entina manampy amin’ny fahasalamana
sy ny nahandro ary ny tontolon’ny zavamaniry toy ny voninkazo . Raha toa ka mijery ny 25 taona lasa isika dia
tsara angamba amin’izao fotoana izao no handinihina ny tontolon-tsika Kristianina ka hahafahana manavao ny
fomba fijery sy ny fomba ho enti-miatrika ny ho avy izay handresena ny fahasahiranana manoloana antsika ka
hananana indray toe-tsaina amam-panahy matahotra an’Andriamanitra. Eto am-pamaranana dia mbola mamerina
indray ny fisaorana an’Andriamanitra teo amin’ny tolo-tsaina nomeny ireo Kristianina izay namorona ny gazety
« TANTELY »
Ranaivo Rasahenolahy, Diakona(fif)
Henri Ratsimbazafy hikalo ny
Nosy Mamiko :
Hampisongadina ny maha-Malagasy
ny zanak’Ambohitantely mandritry ny hetsika « Nosy
Mamiko » izay hotanterahana ny
Alahady 8 Jolay ho avy izao etsy
amin’ny Cinéma Plaza Ampefiloha. Hetsika hanehoan’ny zanak’Ambohitantely indray ny talentany amin’ny sehatry ny hira,
dihy, hainteny sy kabary ary ny
Nasaina manokana hizara ny sehatry ny efitrano malalaky ny
Plaza miaraka amin’ny zanak’Ambohitantely ireo mpanakanto matihanina fanta-daza ka singanina
Ny tarika Solika hikalo ny fahiny,
ny tarika ara-pilazantsara GMMC
hanandratra ny feo fiderana,
Rak Roots hampifaly ny tanora
amin’ny hiran’ny ankehitriny, Ny
Voninavoko haneho ny dihy nentin-drazana Malagasy
ary ny tarika mpandihy Tsingory
haneho ny maha-izy azy amin’ny
alàlan’ny dihy moderna.
Seho matihanina no haroso ary
matihanina avokoa araka izany ireo
mpiara-miasa sy mpanohana rehetra. Mandroso tsara ny fanomanana
na sarotra aza kanefa fifaliana no
iaraha-mizara ao anatin’izany.
Fa anisan’ny hampiavaka ity
seho ity ny fandefasana horonantsary mampisongadina ny hatsaran’ny zavaboaharin’i MadagasiVahinin’ny Gazety Tantely :
kara izay hampatsiahy antsika ny
tokony hankamamiana ity nosinRavalitera Jean Rabenalisoa na
Ramose Naly na Zoky Naly na
« Nosy Mamiko » rahateo no
lohahevitra nampisalorana ny
hetsika,ary inoana fa hianoka tanteraka ao anatin’ny mamy ireo izay
lany misy ahy ary saika izaho hatrany no zokiny @ izany ka izany
no maha Zoky Naly ahy.
Ary farany dia Tily aho, nanorina
ny Sampana Mpiandalana teto
Ambohitantely, efa Foibe Tily ary
efa Filohan’ny Firaisan’ny Skotisma eto Madagasikara, nanatrika
ny Jamboree tany Japon t@ taona
1971. Izay no Sefo Naly. Mpanoratra, mpikabary, mpanakanto, mpanao gazety, mpikambana mahefa
ao amin’ny Akademia ny tenako.
Nampianatra Sekoly Alahady t@
fotoan’andro. Diakona nandritra
ny fotaoam-piasana efatra ary Loholona ankehitriny. Mpikambana
mavitrika, feo fahatelo ao amin’ny
Gazety Tantely : Samy anarana
iantsoana na ahafantarana anao
Tafiditra ao anatin’ny fankalazana eto Ambohitantely daholo ireo.
ny faha-155 taonan’ny FJKM Am- Azonao lazalazaina fohy ve ny
bohitantely ny hetsika « Nosy Ma- aminao
GT: Mivahiny eto amin’ny Gazety TANTELY izay mankalaza
ny faha-25 taonany ianao izao.
Ianao no anisan’ny nanorina azy
satria ianao no Talen’ny Gazety ,
hita ao amin’ny laharana 01, vita
fametrahana ara-dalàna na DL,
lah.01/07/93. Tantarao anay ny
RJR : Ny momba ahy eto Ambohitantely ve sa ny momba ny fiainako ankapobeny?
GT : Izay tokony ho fantatry ny
mpamaky ny Gazetintsika
RJR: Ireo voasoratra eo ambony
ireo ny tena anarako. Efa tratrako
ny fe-toana voalazan’ny Soratra
masina ho andron’ny zanak’olombelona. Manambady an’i Lisy
Randriamampionona aho. Eny
Imerinafovoany, Zana-paritra Gosena no misy anay. Mpampianatra
ny matoan-draharahako. Taranja
malagasy sy Filôzofia no ampianariko. Ankoatra izany dia mampianatra momba ny Serasera koa
aho, indrindra ny Haifandahatra
na ny Kabary. Saika eny @ Ambaratonga ambony izany ankehitriny,
na @ fanjakana na tsy miankina.
Izay no maha Ramose Naly ahy.
Fa ankoatra izay koa dia maro ny
Fikambanana na sehatra, na ao
amin’ny Fiangonana na any ive-
RJR : Tsy fanadino tokoa ny tantara. Miarahaba ny Gazety Tantely
sy ianareo mpiandraikitra manohy ny asa ankehitriny ny tenako.
Nanamarika ny fankalazana ny
faha-130 taonan’ny Fiangonana
Ambohitantely ny fahaterahany.
Ny matoan-dahatsoratra nataon’i
Pasitera Andriamanjato nankininy
amin’izay voalaza ao @ Jaona
3 and.11 no tokony hotsahivina:
“Aza ny ratsy no alain-tahaka fa ny
tsara”, ary ny fizorana ho amin’ny
“Fanavaozana ny saina” no atsangan’ny Gazety Tantely ho filamatra. Asan’ny Fiangonana hoy
izy, ary tsy maintsy ho mifandray
amin’ny foto-pinoan’ny Fiangonana ny famaritana izay atao hoe
(Tohiny Pejy faha 23)
IREO PEJIN’NY « GAZETY TANTELY » EDISIONA VOALOHANY
(Tohin’ny Pejy faha 4)
GT : Nanao ahoana ny endriny tamin’izany? Iza avy ianareo no niandraikitra izany ? Toy inona ny lahatsoratra tao ? Iza avy no nanoratra tao?
Firy ny isan’ny natonta? Ohatrinona
RJR : Sesehena izany fanontaniana
izany! Taratasy tsotra, nahodina RONEO nisy takila 18.
Natao tamin’ny milina fanoratana
tsotra. Nahitana soratra hoe : Gazety
avoakan’ny Vaomieran’ny Fifandraisana Ambohitantely FJKM. Misy sarin’ny fiangonana sy lakroa lavabe.
Tsipika toy ny tanamasoandro miainga avy amin’ny tafon’ny fiangonana
no mananty ny soratra hoe TANTELY
izay manana endrika toho-tantely
Raha tsy diso aho
dia Raminosoa Aimé no nanao ny
sary ary tolo-kevitra avy amin’ i Victor zokiny ny sary taty aoriana izay
niovaova araka ny fotoana ( hafa ny
sary rehefa andro noely ohatra).
Nisy hatramin’ny sary itatra izany
taty aoriana fa tsy mbola azo natao
moa ny namoaka sary pika satria sady
lafo no mbola tsy takatry ny fahaizamanao.
Ny Vaomieran’ny Fifandraisana no
niandraikitra ny famoahana. Rajoharison David moa no Filoha. Mpikambana tao i Micheline vadiny, Raminosoa
Victor sy Noromalala, Richard, Odon,
Ravelomanana Nivo, Jonjo Ramanamahefa Ravalitera Naly.
Ireo no tsaroako fa inoako fa mbola
misy tsy voatonona ka ialan-tsiny.
Ankoatra ny Sakafo ho an’ny Fanahy
dia nisy lahatsoratra samihafa, toy ny
fitaizam-pahasalamana nataon’i Dr
Solofo Randriamampionona, momba
ny ny lalàna nosoratan’i Henri Raharijaona, ny takila ho an’ny Sampana,
ny Isika samy isika, Tononkalo sy
tantara fohy izay nandraisan-dry Ingahy Denis sy ry Rasoanaly Helène
anjara mavitrika. Nisy kilalaon-tsaina
sy momba ny fahaizana ny Baiboly
izay manavanana ny fianakaviana
Ramanamahefa. Nohaingoan’ny sary
itatra sy kisarisary somary hatsikana
nataon’i Dr Solofo.
Roanjato, dia nihena 150 ny isan’ny
natonta ary Ariary 100 ny vidin’ny
iray, izany hoe ampahafolon’ny vidiny ankehitriny. Somary sarotsarotra
ihany ny nandafo izany fa mbola tsy
dia liana amin’ny famakiana gazety
angaha ny olona na tsy manintona ny
endriny , fa niantoka mihitsy ry Richard Raberojo tamin’ny fivarotana
izany . Somary nahakivy ihany ny tsy
dia firehan’ny olona mividy gazety
kanefa mampisaotra an’Andriamanitra fa na dia nisy fiatoana kely aza ny
fivoahan’ny Gazety dia tsy maty izy.
Marihina fa manana Gazetim-piangonana koa ny tao Ambatonakanga
ka Orimbato ny anarany. Nanana koa
Amparibe izay Hasin’ny Famonjena
ny anarany. Toy izany koa ny Afon’i
Faravohitra tao @ FJKM Faravohitra. Marihina anefa fa tamin’izany dia
tsy maintsy nisy Dépot légal na Fametrahana ara-dalàna. Hatramin’izao dia
mbola manan-kery ny DL n’ny Gazety Tantely, ary mbola ny anarako no
GT: Ahoana ny fahitanao ny Gazety
Tantely ankehitriny ?
RJR : Raha ny endriny aloha dia tsara
sy manintona ny Gazety Tantely ary
saika tapitra daholo izay natonta. Afaka mirehareha isika fa tsy ny mpiangona eto Ambohitantely , hatrany ampitan-dranomasina ihany no mividy
ny Gazety fa misy avy any ivelany.
Mahafaly fa mandray anjara ny Sampana ary maro ny tanora no mandray
anjara amin’ny fanoratana. Tsara raha
mamoaka tahirin-kevitra sy fandalinana ary tolo-tsaina samihafa izy.
Tsy ampy ny kilalaon-tsaina sy kisarisary mampiala voly sy mitaiza ny
GT : Inona no hafatrao sy ny teninao
RJR: Misaotra an’Andriamanitra isika fa mbola velona sy salama tsara ny
Gazety Tantely. Mampirisika antsika
hanohana azy ary manainga ny manatalenta sy manam-pahaizana handray
anjara amin’ny fanoratana. Tokony ho
fantatra fa tsy nisy ny ankehitriny raha
tsy nisy ny taloha. Tsy hohadinoina
ireo havantsika nialoha lalana namelona sy nampiaina ny Gazety Tantely
toa an-dry Pasitera Andriamanjato sy
ny mpitandrina mifandimby, Ramanamahefa Jonjo, Raoelina Samy, Rasoanaly Helène, R. Odon, R. Denis.
Singanina manokana eto i OELISOA
izay nitondra fanavaozana sy nanao ny
ainy tsy ho zavatra nanandratra ny Gazety Tantely amin’izao endriny izao.
Ankasitrahina daholo ireo ao amin’ny
Fiandraiketana ny Fifandraisana ankehitriny izay miasa ary mitondra avo
ny lentan’ny Gazety Tantely.
Ireo mpanatontosa ny
Gazety TANTELY ankehitriny
RANAIVO RASAHENOLAHY Z&amp;T
RATSIAMBAKAINA Tahina, RAHARIJAONA Mbolatahina, RAJOHARISON
Aina, RAZAFINDRALAMBO Miezaka,
RASOAMAHARO Francis, RAKOTONJANAHARY Nary, RAOLOSON Ary,
RAKOTOMAMONJY H&amp;L, RAJOHARISON S&amp;L, RAVELOMANANA Rija,
RAVELOMANANA Zo, JHONARISON
Linjo, RATSIMISETA Naomy, RAFANOHARANA Harinavalona, RAKOTOMALALA Joé... sns
Hoy izy mantsy:
«Indro tonga ilay minitra efa nioma-
Tantara nosoratan’ny Mpitandrina
ANDRIAMANJATO Richard Mahitsison
Ny volana febroary taona 1966 no
namaranany ny fanoratana ity tantara fampiseho an-dampihazo ity
na teatra izany.
Natao ho zava-dehibe ny fanoratana ny piesy teatraly satria fitaizana sy fanabeazana ny vahoaka
izany ary natao ho fampitan-kevitra. Miendrika tononkalo ny piesy
iray manontolo, koa tsy ny votoatiny ihany no manana ny lanjany
lehibe fa ny endrika nanoratan’ny
mpanoratra azy ko adia voarafitra
Indraindray, raha tsy matetika
mihitsy aza, dia misy fifandraisana
lalina amin’ny fiainan’ny mpanoratra ny fifantenana ny zava-dehibe
tiana hasongadina amin’ny tantara
Mandom-baravarana ho tsarovana
indray ny raharahan’ny 1947 ho
fahatsiarovana indray ny sorona
tsy hay kosehina izay vitan’ny
Tia Tanindrazana tamin’ny taona
1947-1948 no nanoratana ity tantara ity.
Tantara ho raketin’ny taranaka mifandimby, sy ho fanomezam-boninahitra ny tolona tsy misy farany
izay ataon’ny firenena ho amin’ny
lalan-tsambatra kokoa hatrany.
Tantara mampihetsi-po mitory
ny fitiavan’ny Reny, nantsoina hoe
RAMAVO ny zanany, di ai JORO
ilay tovolahy vao erontrerony,
vonona hanao sorona ny ainy ho
Tsy haveriko aminao ny dinidinika
Efa niarahantsika novisaina.
Afaka minitra vitsy
Dia hiroso izany dia.
Tsy mivonona hitsitsy
N’inon’inona izahay. Tokana ny
Ny hanapaka ny tady mampirongatra ny tsetra,
Fifaliana lehibe ny nahafahana
namerina indray izany tantara antsehatra
«FITIAVAN-TANINDRAZANA» izany ary isaorana
lehibe ireo mpianatra Mpitandrina
taona fahatelo ao amin’ny toerampanomanana Mpitandrina ao Ambatonakanga.
Taona vitsivitsy izay dia nataon’ny toeram-panomanana ho
zava-dehibe ny famohazana ny fitiavan-tanindrazana ao am-pon’ny
Malagasy amin’ny alalan’ny seho
ataon’izy ireo ny 29 marsa isantaona.
Tsy misaraka amintsika ny fitiavana an’Andriamanitra sy ny fitiavana ny Tanindrazana ary ny mpiara-belona. Ity taona ity dia natao
ny 24 jona izany, ankatoky ny fetin’ny fahaleovantenam-pirenena.
Enim-bolana katroka no nanomanan’ireo 11 mianadahy mpiantsehatra ity tantara ity niaraka tamin’i
nanampy azy ireo tamin’ny fiantsana ny tononkalo sy ny fandrindrana an-tsehatra.
Misaotra an’Andriamanitra le- VOAN-TSAMPANA
hibe ny amin’ireo Mpianatra MpiFankalazana ny faha 30 taona an-tsehatra
tandrina nanome ny tsara indrindra
« 30 ans de scène » Rija Ramanantoanina
ka nanome aina ny tantara.
Tontosa tamin’ny volana mai 2018 lasa teo ilay seho goavana nentin’i
Misaotra ireo tanora ireo isika
nampiasa ny talentany sy ny fitia- Rija Ramanantoanina nanamarika ny faha 30 taona niakarany sehatra
vany ny kanto tamin’ny alalan’izao amin’ny maha mpanakanto mpihira azy.
asa soratry ny ray aman-dreny ANDRIAMANJATO Richard Mpitandrina izao.
Nanome lanja sy nandravaka
manokana ny seho ny Tarika NY
RAILOVY nihira ireo hira mifono
fitiavana an’i Madagasikara sy ny
hatsarany. Mankasitraka ireo tsara
sitrapo rehetra, ny Komity nanampy sy nikely aina tamin’ny fanatontosana ny seho.
Misaotra ny Mpitandrina RAKOTONAVALONA Maholy sy ANDRIAMOSE Veromalala tamin’ny
fanampiana ara-toro-hevitra sy
fanohanana ireo mpianatra. Ny
Oniversity Ravelojaona izay nanokatra ny varavarana nanaovana ny
Misaotra ny Fikambanan’ny
Mpanohana ny Toeram-panomanana Mpitandrina na ny FMTPM.
Mankasitraka ny mpijery ny seho
an-tsehatra tonga maro ny alahady
24 jona teo tao amin’ny efitrano
fampisehoana Plazza Ampefiloha.
Atolotra ho an’Andriamanitra irery
ny voninahitra tamin’izay rehetra
Niavaka ny seho tamin’ny Alahady 6 may satria dia antoko mpihira maherin’ny enin-jato isa (600
chœurs) avy amin’ny Fitandremana 19 teto Antananarivo no nampiara-peo tamin’i Rija tamin’izany
ary mpitendry zava-maneno hatrany amin’ny dimapolo isa tany (50
musiciens). Azo lazaina fa isan’ny
seho tsy manam-paharoa iny seho
nataon’i R.R iny satria sambany
no nisy an’izany teto Madagasikara raha fampiaraham-peo amina
mpanakanto iray no resahana.
Ankoatr’izay fandraisana anjara
avy amin’ny antoko mpihirantsika
izay moa dia tsara ny manamarika
fa betsaka tamin’ireo hiran’Ambohitantely no nosafidian’i Rija Ramanantoanina hokaloina tamin’io
fotoana io : « Feo miantso, Iriko
ianao ry noely, ô ! andro iray,sns…
Eo amin’izay lafiny hira izay
ihany, dia nibahan-toerana nandritran’io seho fankalazàna io ny hira
fiderana sy fisaorana an’Andriamanitra satria nambaran’i Rija ombieny ombieny fa fahasoavana manoNy antoko mpihira teto amin’ny kana nomen’Andriamanitra azy ny
Fiangonana FJKM Ambohitantely talenta amin’ny fihirana koa rariny
moa dia anisan’ireo nandray an- loatra raha isaorana Izy Tompo.
jara feno tamin’iny seho fankala- Fanompoam-pivavahana fohy no
zana iny tamin’ny alalan’ny Cho- nentina nanombohana ny fotoana
rale Ambohitantely sy ny Chorale ka ny Mpitandrina RANAIVONIARIVO Tiana Alisoa
avy ao amin’ny fitandremana
FJKM Atsimon’i Mahamasina no
nitarika ny fotoana. Naharitra ora
efatra teo ny seho niarahana tamin’i Rija tao amin’ny lapan’ny
fanatanjahan-tena sy ny kolontsaina Mahamasina.
Ho an’Andriamanitra irery
ny Voninahitra !
Mitafatafa eo amin’ny maloka !
Zana-paritra mialavoly !
Nanamarika ity taona ity koa
ny fitsangatsanganana nataon’ny
Fiangonana, toy ny mahazatra,
isaky ny andro Fiakarana.
Sady dihy no fanatanjahantena !
Fotoam-pivavahana niarahana tamin’ireo mponina teny Katsaoka
Hetsiky ny Sampana !
Fiaraha-misakafon’ny Dorkasy !
Ireo Mpanatalentan’ !
Tsy diso anjara ny ankizy sy ny
tanora. Faly dia faly amin’ireto
Tanora mpiangaly «VTT»
Final.pdf (PDF, 44.5 Mo)
fanahy fiangonana tsara tamin fahamasinana gazety ambohitantely antsika soratra tenin tantara tantely izany masina andriamanitra
Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 01882568.